Vaovao - Zavatra ankapobeny momba ny electrodes welding
Zavatra ankapobeny momba ny electrodes welding
Tianqiao welding electrode no safidy matihanina
Ilaina ny electrode welding, ary zava-dehibe ny hahafantaran'ny mpiasa mpikirakira sy mpiasa mifandraika amin'izany izay karazana ampiasaina amin'ny asa samihafa.
Inona no atao hoe electrodes welding?
Ny electrode dia tariby metaly mifono vy, izay vita amin'ny akora mitovy amin'ny vy tariby. Ho an'ny vao manomboka, misy ny elektrôla azo ampiasaina sy tsy azo ampiasaina. Ao amin'ny vy vy vy ampinga (SMAW) fantatra amin'ny anarana hoe tapa-kazo, elektroda dia azo ampiasaina, izay midika fa ny electrode dia levona mandritra ny fampiasana azy ary miempo amin'ny lasitra. Ao amin'ny elektrônika Tungsten Inert Gas welding (TIG) dia tsy azo ampiasaina, ka tsy miempo izy ireo ary lasa anisan'ny lasitra. Miaraka amin'ny vy Metal Arc Welding (GMAW) na MIG welding, tariby manome sakafo tsy tapaka ny electrodes. 2 Ny fantsom-boaloboka misy tadin'ny fllux dia mila elektroda tubular azo ampiasaina tsy an-kijanona izay misy flux.
Ahoana ny fomba hisafidianana electrodes welding?
Ny fisafidianana electrode dia voafaritry ny fepetra takian'ny asan'ny welding. Anisan'izany ireto:
Misy electrode maivana sy mavesatra mifono. Ny electrodes mifono hazavana dia misy fonosana maivana izay ampitaina amin'ny alàlan'ny fikosehana, ny famafazana, ny fanosehana, ny fanasana, ny fanosehana na ny fikapohana. Ireo elektroda mifono mavesatra dia mifono amin'ny alàlan'ny extrusion na mitete. Misy karazana fonosana mavesatra telo lehibe: mineraly, selulosy, na fitambaran'izy roa. Ny fonosana mavesatra dia ampiasaina amin'ny fantsom-by vy, vy ary sehatra mafy.
Inona no dikan'ny isa sy litera amin'ny tehina?
Ny American Welding Society (AWS) dia manana rafitra miisa miisa izay manome vaovao momba ny electrode manokana, toy ny fampiharana izay ilana fampiasana azy tsara indrindra sy ny fomba tokony hampiasana azy io hahomby lehibe indrindra.
tarehimarika Karazana firakotra Welding amin'izao fotoana izao
0 Ny sodium sélulose avo DC +
1 Potasioma cellulose avo AC, DC + na DC-
2 Sodia titania avo AC, DC-
3 Potasiôna titania avo AC, DC +
4 Vovoka vy, titania AC, DC + na DC-
5 Sôdiômanôma ambany DC +
6 Potasioma hidrôzenina ambany AC, DC +
7 Oxyde vy be, vovo-potasioma AC, DC + na DC-
8 Potasioma hidrôzenina ambany, vovoka vy AC, DC + na DC-
Ny "E" dia manondro electrode welding arc. Ny tarehimarika roa voalohany amin'ny isa 4-isa ary ny tarehimarika telo voalohany amin'ny isa 5-isa dia mijoro ho tanjaka mahery. Ohatra, ny E6010 dia midika hoe 60.000 pounds isaky ny santimetatra toradroa (PSI) tanjaka fihenjana ary ny E10018 dia midika hoe tanjaka 100 000 psi. Ny tarehimarika manaraka amin'ny farany dia manondro toerana. Noho izany, "1" dia midika ho electrode étition rehetra, "2" ho an'ny electrode fisaka sy marindrano, ary "4" ho an'ny electrode fisaka, marindrano, mitsivalana ary ambony. Ny tarehimarika roa farany dia mamaritra ny karazana coating sy ny fantson-drano ankehitriny. 4
Electrode Faharetana amin'ny sintona Toerana Karazana fonosana sy ankehitriny
Ny fahalalana ny karazana electrodes sy ny fampiharana azy ireo dia manampy amin'ny fanatanterahana tsara ny asan'ny welding. Ny fiheverana dia misy ny fomba welding, ny fitaovana vita amin'ny fantsom-batana, ny fepetra anatiny / ivelan'ny trano, ary ny toeran'ny welding. Ny fanazaran-tena amin'ny basy sy electrodes isan-karazany dia afaka manampy anao hamantatra izay elektrôra hampiasaina amin'ny tetikasa welding.
Atsofohy vy vy vy, Kavina vy 1.5 Mm, Ss Welding Electrode, vy vy, Tsorakazo vy tsy mitovy, electrode welding,